မြေမြှုပ်မိုင်းရှာ ကမ္ဘောဒီယား သူရဲကောင်း ကြွက်ကလေး မက်ဂါဝါ အသက် ၈ နှစ်တွင် သေဆုံး - Xinhua News Agency
ဖနွမ်းပင်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ကမ္ဘောဒီယားနိုင်ငံ၏ မြေမြှုပ်မိုင်းရှာ ရွှေတံဆိပ်ဆုရ သူရဲကောင်း ကြွက်ကလေး မက်ဂါဝါသည် အသက် ၈ နှစ်တွင် သေဆုံးသွားကြောင်း ပရဟိတအဖွဲ့ Apopo က အင်္ဂါနေ့တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။“သူရဲကောင်းကြွက်ကလေး မက်ဂါဝါ ဒီသတင်းပတ်ကုန်မှာပဲ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ သေဆုံးသွားတယ်”ဟု သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
“မက်ဂါဝါဟာ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ပုံမှန် တက်တက်ကြွကြွ ကစားနေဆဲပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီရက်သတ္တပတ်မှာတော့ အသွားအလာနှေးသွားပြီး အိမ်ငိုက်နေတာက များတယ်။ နောက်ဆုံးရက်တွေမှာ အစားလည်းသိပ်မဝင်တော့ဘူး”ဟု ဆိုသည်။
၎င်းတာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် ၅ နှစ်တာ ကာလတွင် မက်ဂါဝါသည် မြေမြှုပ်မိုင်းနှင့် အခြားပေါက်ကွဲစေတတ်သည့်ပစ္စည်း ၁၀၀ ကျော်ကို ရှာဖွေပေးခဲ့ရာ Apopoတွင် ယနေ့အထိ အောင်မြင်မှုအရှိဆုံး သူရဲကောင်း ကြွက်လေး ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
Apopoသည် မြေမြှုပ်မိုင်းနှင့်တီဘီရောဂါ ရှာဖွေမှုများ အသုံးပြုရန် အာဖရိကဧရာမကြွက်ကြီးမျိုးများကို လေ့ကျင့်ပေးသော အကျိုးအမြတ်မယူသည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
“ကမ္ဘောဒီယား ရပ်ရွာအတွင်း အသက်ဆုံးရှုံးမှာ ကိုယ်အင်္ဂါရပ်တစ်ခုခု ဆုံးရှုံးမှာကို စိုးရိမ်စရာမလိုဘဲ နေထိုင်၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်၊ သွားလာလည်ပတ်နိုင်အောင်လို့ သူက အကျိုးဆောင်ခဲ့တယ် ”ဟု ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားသည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာတွင် မက်ဂါဝါသည် ၎င်းအငြိမ်းစားမယူမီ ဇွန်လက ကမ္ဘောဒီးယားတွင် မိုင်းရှာဖွေရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေခြင်းကို ဂုဏ်ပြုရန်အတွက် ဗြိတိန်၏နာမကျန်းသောတိရစ္ဆာန်လေးများပြည်သူ့ဆေးခန်း(PDSA)မှ ပေးအပ်သော ရွှေတံဆိပ်ဆုကို ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မက်ဂါဝါသည် တန်ဇန်းနီးယားတွင် မွေးဖွားပြီး Apopoတွင် လေ့ကျင့်မှုခံယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မြေမြှုပ်မိုင်းတွင် အသုံးပြုသည့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သည့် ဓါတုဗေဒပစ္စည်းကို ရှာဖွေရာနှင့် နောက်ကွယ် လက်သည်ကို လမ်းညွှန်တတ်ရန် လေ့ကျင့်သင်ယူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဒေသတွင်းနှင့်ပြည်တွင်းပဋိပက္ခဒဏ်များကြောင့် ကမ္ဘော့ဒီးယားနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာတွင် စစ်ဒဏ်သက်ရောက်မှု အဆိုးဆုံးခံရသည့် နိုင်ငံ တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ပဋိပက္ခအတွင်း ကျန်ရစ်သည့် မြေမြှုပ်မိုင်းနှင့်အခြားလက်နက်ခဲယမ်းများက ၄ သန်းမှ ၆ သန်းထိ ရှိနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများအရ သိရသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားတွင် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က မြေမြုပ်မိုင်းနှင့် မပေါက်ကွဲသေးသည့်လက်နက်ပစ္စည်း ပေါက်ကွဲမှုများကြောင့် လူ ၁၁ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ၃၃ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း အစိုးရ အစီရင်ခံစာ တစ်ရပ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွင်း မြေမြှုပ်မိုင်းနှင် မပေါက်ကွဲသေးသည့်လက်နက်ပစ္စည်း ပေါက်ကွဲမှုများကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၉,၈၀၈ ဦး နှင့်အခြား ဒဏ်ရာရရှိသူ ၄၅,၁၅၆ ဦး ရှိခဲ့ကြောင်း ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားသည်။ (Xinhua)
Cambodia’s landmine-sniffing hero rat Magawa dies at 8
PHNOM PENH, Jan. 11 (Xinhua) — Mine-sniffing hero rat Magawa, who wonagold medal for his mine-detection work in Cambodia, has died at the age of eight, charity Apopo said inanews release on Tuesday.
“Hero rat Magawa passed away peacefully this weekend,” the news release said. “Magawa was in good health and spent most of last week playing with his usual enthusiasm, but towards the weekend he started to slow down, napping more and showing less interest in food in his last days.”
During his five-year career, Magawa found over 100 landmines and other explosives, making him Apopo’s most successful hero rat to date, it said.
“His contribution allows communities in Cambodia to live, work, and play, without fear of losing life or limb,” it added.
In September 2020, Magawa was presented withagold medal from British veterinary charity People’s Dispensary for Sick Animals for his work detecting landmines in Cambodia before he retired in June last year.
Magawa was born and trained in Tanzania by Apopo to detect the scent of the explosive chemicals used in landmines and point them out to his handlers.
Regional and internal conflicts had left Cambodia as one of the most mine and explosive remnants of war-affected countries in the world. An estimated4to6million landmines and other munitions were left over from the almost three decades of conflicts.
Landmines and unexploded ordnance (UXO) explosions killed 11 people and injured 33 others in Cambodia last year,agovernment report said, adding that from 1979 to 2021, landmines and UXO explosions had claimedatotal of 19,808 lives and either injured or amputated 45,156 others. Enditem
A handler holdsalandmine detection rat in Phnom Penh, Cambodia on Aug. 27, 2020. (Photo by Phearum/Xinhua)
ဗီယင်ကျန်းမြို့နှင့် စူးကျိုးမြို့ကြား ကုန်တင်ရထား စတင်ပြေးဆွဲခဲ့